Sandal Resorts: veloma fahavaratra, Salama fianjerana!
Home » Travel Deals » Sandal Resorts: veloma fahavaratra, Salama fianjerana!
Oktobra 2, 2020
Rehefa manomboka mangatsiaka ny andro amin'ny toerana maro manerana an'izao tontolo izao, ny Sandals Resorts any Karaiba dia mandray ny fianjerana miaraka amin'ny tolotra manokana. Mandritra ny fotoana voafetra, ny vahiny ao amin'ny Sandals dia afaka mandray anjara amin'ny sary manokana amin'ny toerana itodihany maro any Karaiba mafana sy mafana.
Ny mpitsidika dia hahazo crédit 250 $ ho an'ny sary ao amin'ny toeram-pivarotana voafidy. Raha te handray an'ity trosa mampientanentana ity izay hisambotra ny fahatsiarovana ny fialan-tsasatra nofinofy, dia tsy maintsy misoratra anarana ao anatin'ny 72 ora ny famandrihana famandrihana Ary ity fanolorana fianjerana manokana ity dia azo ampifandraisina amin'ny fampiroboroboana ny resort ankehitriny:
Alina 1 maimaim-poana
Amin'ny sokajy efitrano voafantina
Bola amin'ny famandrihana $ 1,000
Hatramin'ny 65% ​​ny tahan'ny fandefasana entana
Zahao ny toerana rehetra tolotra mahafinaritra, toa ireo voalaza etsy ambony ary ny sasany hafa koa, dia hita avy amin'ny Sandals satria ampidirina any Karaiba ny fararano:
Sandal Emerald Bay any Great Exuma, Bahamas
Sandals Grande Antigua any St. Johns, Antigua ary Barbuda
Sandals Royal Bahamian any Nassau, Bahamas
Sandal Barbados any St. Lawrence, Barbados
Sandals Royal Barbados any St. Lawrence Gap, Barbados
Sandal Grenada any St. George's, Grenada
Sandals Montego Bay any Montego Bay, Jamaika
Sandal Negril any Negril, Jamaika
Sandals Ochi ao Ocho Rios, Jamaika
Sandals Royal Caribbean any Montego Bay, Jamaika
Fambolena Royal Sandals ao Ocho Rios, Jamaika
Sandals South Coast any Whitehouse, Jamaica
Sandals Grande St. Lucian any Gros-Islet, Saint Lucia
Sandal Halcyon any Castries, Saint Lucia
Sandaly Regency La Toc any Castries, Saint Lucia
Boky amin'ny fatokisana
Sandals dia manana motera famandrihana an-tserasera izay hampihatra azy ho azy ny tolotra rehetra azo omena mba hanomezan'ny vahiny ny tahan'ny mety indrindra amin'ny datin'ny dia lavitra. Raha ny marina, ny Sandals dia hanome toky fa raha mahita vidy mora vidy kokoa ny vahiny na aiza na aiza, dia hifanaraka izany. Raha ao anatin'ny 24 ora famandrihana vakansy an-tserasera amin'ny www.fifanent.com, ny vidiny ambany noho ny daty nahatongavan'io dia mankafy ny isan'ny alina sy efitrano fandraisam-bahiny, Sandals dia hamerina ny fahasamihafana.
Tsy mila miandry!
Ny famandrihana mendrika dia hanana safidy "mitazona ny efitrano" amin'ny $ 49pp fotsiny. Raha voafantina ny safidy "mitazona", ny carte de crédit ampiasaina amin'ny fametrahana dia hoentina 302 $ fanampiny ao anatin'ny 21 andro. Ny salanisa sisa tavela amin'ny fialan-tsasatra dia homena vola 45 andro mialoha ny daty fisoratana.
Miaraka amin'ny tolotra maro be misy ary manome antoka ny hahatongavan'ny rivotra mandamina ny rivotra, dia mety ny fotoana hanaovana famandrihana fialantsasatra miaraka amin'ny Sandals Resorts.
Tonga ireo mpizahatany ao Pakistan hahita trano fisakafoanana mihidy
Lalao fitsangatsanganana tsara indrindra hilalao amin'ny dia